Sannadkaan 2012 Waa Sannadka Strindberg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Författaren August Strindberg (1849-1912). Foto: Scanpix
Sannadkaan 2012 Waa Sannadka Strindberg
Publicerat fredag 20 januari 2012 kl 14.36
Bulsho walbaa waxay leedahay abwaan caan ka dhex ah oo aan la hilmaami karin. Modo hada laga joogo 100 sanno ayaa ka soo wareegtay goortii uu geeriyoodey abwaankii, hal abuurihii ugo weynaa Iswedhen, August Strindberg. 14 may 1912 ayey ahayd markuu baxay. Sannadkaan 2012 ayaa loo bixiyey sannadkii Strindberg kaas oo siyaabo kale gadisan loo xusi doono.
August Strindberg oo hada modo laga joogo 100 sanno geeriyoodey, waxuu ka tagay goraalo, gabayo, farshaxano iyo sawiro. Dhamaan kuwaas ayaa ahmiyad gooniya loo siindoonaa sidii kor loogu soo qaadi lahaa masraxyada, meelaha farshaxaddaha lagu soo bandhigo, maktabadaha iyo madxafadaha dalka gudhiisa iyo dibadiisaba inta logu guda jiro sannadkaan, oo loo bixiyey sannadka Strindberg.
Dhamaan farsamooyinka uu Strindberg ka tagey ayaa loo soo badhigayaa riwaayed ahaan, musik ahaan iyo dans ahaan.ku waas oo dadka xataa kala soconkaraan boga internetka ee Strindberg2012.se
Madxafka Strindbergmuseet oo markii hore ahaan jiray gurigii ugo danbeeyey uu degaanaa Strindberg ayaa lagu soo badhigayaa nolashiisa qaaska ah oo ay la socoto cod, taas oo loo bixiyey magaca "Strindberg i Centrum" ama "Strindberg oo diirada saaran". kasekoow in la soo bandhigo qoraaladiisa iyo farshaxanadiisa waxaa sidoo kale madxafka lagu muujinaayaa shaqsiyada qaas ahaaneed ee Strindberg, sida xiisaha oo u hayey arimaha bulsha, siyaasada iyo weliba cilmiga sayniska iyo musikada. Sidaa waxaa yeri madaxa madxafka Stefan Bohman.
- Strindberg waxa uu ahaa ruux muhiim ah, waxa uuna ahaa ruux xasaasiya. Waaqtiyo badan waxaa isbedbadelayey xiisa loo hayeey Strindberg, lakiin waxaan marna isbadelin oo muhiim ah waxa weeyaan riwaayadaha Strindberg. Waana riwaayadaha waxa uu caanka kaga ahaa wadanka dibadiisa.
qaybo badan oo ka tirsan 60:kan riwaayadooded ee Strindberg ayaa sanadkaan lagu soo badhigidoonaa maslaxyada ugu waaweyn dalkaan Isweedhen, Grekland, England, Frankrike, Finland iyo weliba USA.Riwaayadaha la soo badhigayo waxaa ka mid ah riwaayadaha la kale yirah FRÖKEN JuLIE, DÖDSDANSEN iyo SPÖKSONATEN.
Teaterka ay sida badan u maqlaan dadka isweedhen waa Radioteatern, kaas oo haysta dhamaanba cajaladaha ay ku doobanyahiin Riwaayadaha Strindberg. Sidaa waxaa noo xaqiijiyey Stina Oscarson oo madax ka ah Radioteartern.
- Waan haysanaa gabi ahaanba rawaayadaha Strindberg, waana bahiinaynaa habeen kasta oo sabtiya inta lagu gudejiro sannadkaan. Waxaana u kale qaadeynaa maadooyinka kale ah anshaxa iyo moralka, ayey tir Stina Oscarson.
Riwaayada ugo da'weeyn rewaayadaha August Strindberg oo ku kaydsan kaydka Radioteartern waxaa ka mid ah riwaayad layirado Den stora landsvägen oo afsoomali noqnaysa wada weyn oo la sameeyey 1949. Radioteatern waxaa la hir gelyey 1925 kaas oo bilowgii si toos ah u siideenjireen dad ay ka mid yahiin Harriet Bosse oo ahayd xaaskii sadexaad ee August strindberg. Lakiin barnamijdkaa sabtiyada soo socda lasiideynayo waxaa ka mid ah codad caan ah.
- Codadkaan waa kuwo aad u wanaagsan, waxaa la maqli karaa codka jilayaal aan marna la hilmaami karin. Sidaa waxaa yeri Stina Oscarson oo madaxa Radioteatern.
Wax soo saarkii Strindberg
Abwaan ahaan Strinberg waxa uu ahaa abwaan wax soo saar badan, waxa uu qoray in ka badan lixdan riwaayadood, toban sheekooyinka dheerdheer iyo intaas oo kale oo ah sheekooyin gaagaaban. Sidoo kale waxa uu qoray sideed kun oo waraaqood. Waxa uuna ahaa gabyaa. Dhanka farshaxankana August Strindberg waxa uu soo shaac baxay geeridiisa ka bacdii. Farshaxankiisana waa mid qaymo kore jooga maantey. Waxa uuna ka mid yahay farshaxan yahanada reer isweedhen ii sida weyn looga qiimeeyo dalka dibadiisa.
- Dabcan inta badan waxuu ku howlanaa qorista suuganta. Tan ugo weyna taas ayey ahayd. Lakiin sidoo kale waxa uu ahaa farshaxaniiste waxa uuna la socan jiray farshaxayahanada waaweyn ee reer yourob, sida Erd Munk iyo Paul Gauguin. Marka farshaxanyahan ahaan waa manta mid xiisale. Sidoo kale waxa uu tijaabiyey qaadista masawirada, waxayna masawiradiiso ahaayeen mid xiiso leh, ayuu yeri Stefan Bohman.
Dhanka uu ka liitey
Strindberg waxa uu sidoo kale ahaa nin ka faalooda arimaha bulshada si ba'an u weerara hayadaha dowligaa, waddaninimada xagjirkaa, hubka, kaniisada iyo boqortooyada iyo weliba Feminismka (sinaanta ragga iyo dumarka).
Lakiin dhanka uu ka liitay waxaa ka mid ahaa luuqaha, cilmiga dabiiciga ah iyo alkemiga.